Gbanwee ihe onyonyo ochie anyị ka ọ bụrụ ebe ntụrụndụ | Androidsis
Taa, m na-ewetara gị nyocha vidio dịtụ iche, taa achọrọ m igosi gị otu esi agbanwe igwe onyonyo ochie anyị ka ọ bụrụ ebe ntụrụndụ ekele dị ike Igbe TV na gam akporo 6.0 Marshmallow na Gamepad na teknụzụ Bluetooth site na Xiaomi the Xiaomi Gamepad ma ọ bụ Xiaomi Joypad. Ihe a niile maka ihe na-erughị euro 90, ezigbo azụmaahịa nke ị gaghị enwe ọnụ karịa Black Friday gara aga.
Ọzọ m na-akọwa nkọwa niile, nke ọma na nke ọjọọ banyere nke a senseshional Nchikota TV Box plus video egwuregwu njikwa nke ahụ na-ekwe nkwa ịgbanye telivishọn ọ bụla nwere njikọ HDMI gaa na ngalaba multimedia maka ụlọ anyị, ma ọ bụ ọbụna ihe njikwa vidiyo vidiyo siri ike nke gam akporo iji nwee ike igwu egwuregwu vidio kachasị amasị anyị na nnukwu ihuenyo. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ na ihe niile na nke a Nchikota TV Box tinyere Xiaomi Gamepad njikwaNaanị ị ga-pịa vidiyo nke m hapụrụ dị n'elu usoro ndị a ka ị wee nwee ike iji anya gị hụ ihe niile njikọta a nwere ike ịnye anyị na naanị 90 euro, obere n'okpuru ọnụahịa ahụ, nkwa ga-agbanwe TV ochie anyị n'ime emana efen Smart TV.
1 Nkọwapụta teknụzụ nke Xiaomi Gamepad
2 Sunvell T95U Pro Nka na ụzụ nkọwa
3 Echiche nke onwe m banyere TV Box Sunvell T95U Pro
4 Echiche nke onwe m banyere onye njikwa Bluetooth Xiaomi Gamepad
Nkọwapụta teknụzụ nke Xiaomi Gamepad
Xiaomi Gamepad bụ ihe egwuregwu vidio, nke ga - abụ ihe ọystụ, nke nwere teknụzụ Bluetooth na ụdị nke bụ ngwakọ nke njikwa njikwa njikwa Microsoft mbụ na Sony egwuregwu egwuregwu vidiyo a ma ama.
Ihe ntanetị nwere ihe ngosi 3-axis vibration moto na ike ndọda, O nwere uzo uzo abuo, obe kpochapu, bọtịnụ anọ A, B, Y na X n'ihu n'ihu n'akụkụ aka nri, ihe abụọ na-akpata n'ụdị Stationlọ Ọrụ Play Station R2 na L2 na naanị n'elu bọtịnụ abụọ R1 na L1 na-echetara Anyị ukwuu na Sony console.
Iji mechaa, ọ nwere n'ihu ya onwe ya na a bọtịnụ azụ azụ na akara MI, nke a na-eji iji gbanye ebe dịpụrụ adịpụ ma mee ka ọchụchọ ya nwee ogologo pịa nke bọtịnụ ahụ. Na mgbakwunye na dịka na Stationlọ Egwuregwu, anyị nwekwara bọtịnụ raara onwe anyị nye ịlaghachi na bọtịnụ menu raara onwe ya nye, abụọ abụọ na ihu na akụkụ nke ime nke dị n'elu bọtịnụ MI.
A na-enweta ike njikwa site na ịtinye batrị AA na-anaghị akwụ ụgwọ, nke na dị ka Xiaomi si kọwaa iwu ahụ n'onwe ya yana ekele maka obere oriri nke ọgbara ọhụrụ Bluettooh teknụzụ, na-enye anyị ohere nnwere onwe dị ukwuu na ya. Ka o sina dị, mgbe m jiri izu abụọ kpụ ọkụ n'ọnụ, m ka agbanwebeghị batrị.
Nwere ike ịnweta njikwa ime Xiaomi Bluetooth na njikọ a maka naanị 29,91 euro mbufe akwụ ụgwọ gụnyere na ọnụahịa.
Sunvell T95U Pro Nka na ụzụ nkọwa
4K - 2K - FullHD
Amlogic S912 Octa isi na 2.08 Ghz ọsọ ọsọ ọsọ
2 Gb LPDDR
16 Gb jiri nkwado MicroSD
AV - HDMI - RJ45 - Onye na-agụ MicroSD - USB2.0 - Bluetooth 4.0 - WiFi 2.4 na 5 Ghz
Chassis aluminom na ikanam na-egosi oge na njikọ Wifi - KODI 17.0 E tinyegoro dịka ọkọlọtọ - Mobdro tinyegoro dịka ọkọlọtọ.
5V DC chaja ikike
X x 130 90 30 mm
56.31 Euro na onyinye pere mpe site na ịpị ebe a
Echiche nke onwe m banyere TV Box Sunvell T95U Pro
Banyere echiche m banyere nke a Sunvell T95U Pro TV IgbeO doro anya na ọ bụ mgbe ihe karịrị otu izu nke iji ya kpụ ọkụ n'ọnụ, nke m na-agbanyụghị n'oge ọ bụla ebe ọ bụ na m na-eji ya ọbụna dị ka mkpu maka ntinye nke Oge maka gam akporo, ọnụ egosighi na ike gwụrụ ma ọ bụ ikpo oke ọkụIhe ọzọ bụ, ya asatọ-isi processor, ọ bụ ezie na ọ bụ a kama ala-ọgwụgwụ processor, na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè mgbe niile, na-enye ihe karịrị ezigbo arụmọrụ na ihe karịrị m na-atụ anya ka a na ngwaọrụ a nso.
Otu ihe ahụ na-eme ya RAM ebe nchekwa na 2 Gigabytes karịrị ike na zuru ezu iji tụgharịa ngwa na ndabere. Banyere njikọta Wifi ya, njikọ orntanetị ma ọ bụ njikọ Bluetooth ha karịrị nke ziri ezi na achọpụtaghị m ihe ọ bụla dị iche na akara akara ma ọ bụ nso na-atụnyere ya na Samsung Galaxy S6 Edge Plus.
Ya mere na-enweghị n'ihu ado m nwere ike ọ gaghị enyere ma, site àgwà na uru ego kwadoro igwe TV a ebe ọ bụ na ọ na-enye anyị ezigbo ahụmịhe onye ọrụ maka obere ego.
Echiche nke onwe m banyere onye njikwa Bluetooth Xiaomi Gamepad
Banyere echiche mbụ m banyere nke a Xiaomi GamepadỌ bụ ezie na gbasara ahụmịhe onye ọrụ na egwuregwu m nwee ike ịnwale na nke kwekọrọ na ọystụ ma ọ bụ Gamepads, ọ dị mma karịa, dị oke mma, nke a apụtaghị na ọ dịkarịa ala maka oge ọ dịtụ ihe mgbagwoju anya nke ngwa iji kwado. dika m kowara na vidiyo, Android ka nwere ọtụtụ ihe iji melite n'ihe gbasara egwuregwu ya na ndakọrịta na njikwa ndị a.
Nsogbu kasịnụ m hụrụ na Xiaomi Gamepad abụghị nsogbu na njikwa ahụ n'onwe ya, kama ọ bụ nsogbu na sistemụ arụmọrụ gam akporo n'onwe ya na ndị mmepe egwuregwu, ọ bụkwa ya bụ ọtụtụ egwuregwu gam akporo m chọrọ iji ya na onye njikwa Xiaomi Gamepad enweghị ọystụ kwekọrọOtú ọ dị, aha ndị dị mkpa dị ka ndị a na-akwụghị ụgwọ, Nwụrụ Anwụ ma ọ bụ Oku nke Ọrụ ka edozi ma dị mma maka igwu egwu na Xiaomi Gamepad, ọ bụ ezie na n'egwuregwu ndị a nhazi nke njikwa, nke bụ ihe dị mkpa nke anyị ga-emerịrị na mbụ, bụ nhazi nke ghọrọ dịtụ arọ ma na-agwụ ike ma bụrụ ihe mgbagwoju anya maka onye ọrụ gam akporo gam akporo na-achọ ijikọ onye njikwa ma ọ bụ ngwa ma malite ịnụ ụtọ egwuregwu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Otu esi agbanwe igwe onyonyo ochie anyị ka ọ bụrụ ebe ntụrụndụ maka erughị euro 90
Amazon na - aru ​​oru n’ozi ohuru ohuru nwere ihuenyo 7-inch